China EAS လက်လီအရောင်းဆိုင် 58khz AM အဝတ်အထည်ဆိုင်နှိုးစက်သတိပေးချက်ခိုးယူမှု Aystem Gate-PG400 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | .တ္ထရော
EAS လက်လီအရောင်းဆိုင် ၅၈ ကီလိုဂရမ်အ ၀ တ်အထည်ဆိုင်သတိပေးခိုးယူမှုနှိမ်နင်းရေး Aystem Gate-PG400
Full-featured, အားကောင်းသည့် AM system ကိုအသုံးပြုပြီးကော်တံဆိပ်များ၊ ဒီ pedestal AM system သည်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မဆိုသင့်လျော်ပြီးလက်လီလုံခြုံရေးစျေးကွက်၏ထိပ်ဆုံးတွင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
AM system သည်၎င်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အများစုထက်သာလွန်သည်။ ကြီးမားသောတံခါးပေါက်များစွာတွင်ထူးကဲသည်။ ခေတ်မီ ABS ဘောင်နှင့်အတူတာရှည်ခံသော်လည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကြော်ငြာကြော်ငြာစာတန်းများအတွက်နေရာရှိသည်။
အရွယ်အစား: 1560 * 420 * 20MM
•စစ်ဆေးရေးအကွာအဝေးသည်အင်တာနာနှစ်ခုဖြင့် ၃.၆ မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
•ဝင်ပေါက်အကျယ်ပေါ် မူတည်၍ အင်တင်နာထည့်နိုင်သည်။
EAS လေးစနစ် - PT309
၀.၆-၂.၈ မီတာ (ဆိုက်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မူတည်သည်)
1. အရည်အသွေးမြင့်သော ABS ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်၊
2.Master pedestal သည်ကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်တစ် ဦး ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Reciever အောက်ခံမာစတာအောက်ခံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမယ်နေစဉ်,
4.Level - ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအမှားမြင့်မားသောအဓိကဘုတ်အဖွဲ့။
5. AM EAS လုံခြုံရေးအချက်ပြစနစ်သည်အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ အိတ်များနှင့်အိတ်များဆိုင်များ၊ ကလေးများစတိုးဆိုင်များနှင့်အခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
perior ABS ပစ္စည်းပေါ့ပါးသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်
♦အင်တင်နာတစ်ခု၏စစ်ဆေးမှုအကွာအဝေးမှာ ၀.၆ မီတာမှ ၂.၈ မီတာဖြစ်သည်။ soft DR tag ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အင်တင်နာနှစ်ခုအကြားအကျယ်ဆုံးသောအကွာအဝေးသည် ၁.၅ မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အင်တာနာသုံးခုသည် ၅.၆ မီတာကျယ်သောဝင်ပေါက်ကိုကာကွယ်ရန်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်လုပ်သည်။ စျေး ၀ ယ်စင်တာများ၏ထူးကဲကောင်းမွန်သောအလှဆင်မှုများဖြင့်ပြည့်စုံစွာပေါင်းစပ်ထားပြီးအဆင့်မြင့်စျေးဝယ်စင်တာများအတွက်သင့်တော်သောအမျိုးမျိုးသောလက်လီစတိုးဆိုင်များကိုလွယ်ကူစွာကာကွယ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ EAS Antenna AM System Acrylic အရည်အသွေးမြင့်မားသော 58KHz အဝတ်အထည်ဆိုင်လုံခြုံရေး Gate-PG212A
နောက်တစ်ခု: EAS စနစ် RF EAS 8.2mhz RF လုံခြုံရေးစူပါမားကတ်တံခါး Antenna-PG308